राष्ट्रिय समाचार – Page 170 – धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
‘बाटो हगुवा’लाई एकसय जरिबाना!
काठमाडौं, असार १ – केहीवर्ष पहिलेसम्म धेरै गाउँठाउँका बाटोघाटोमा हिँडिसक्नु हुन्नथियो । नाकमुख थुनेर हिँड्नुपर्ने । चिप्लेरै लडिएलाजस्तो जताततै फोहोर । छेउकुनामा भन्दा पनि बाटोमै दिसापिसाब गर्ने बानी । पछिल्लोपटक खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने क्रम बढेसँगै बाटोघाटोमा फोहोर गर्ने प्रवृत्ति केही घटेको छ । तर पुरै सुधार हुन भने..
नौविसे नागढुंगा सडक मर्मत वर्षात अघि नै सकिने
काठमाडौं, – सरकारी टोलीले शुक्रबार नागढुङ्गा–नौविसे सडक खण्ड मर्मतको काम निरीक्षण गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला, ट्राफिक प्रहरीका डिआइजी केशव अधिकारी, सडक विभागका महानिर्देशक लगायतका सरकारी अधिकारीले काठमाडौ..
ज्यान मार्ने धम्कीपछि एनटीभी अध्यक्षको राजिनामा
काठमाडौ-नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाँईको दवावमा टेलिभिजन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सीताराम अग्रवालले आफ्नो जीउ ज्यानको सुरक्षा नभएको कारण देखाउँदै सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल समक्ष राजिनामा दिएका छन् । उनको राजिनामा मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत पनि गरेको छ । डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अग्रवाललाई नेपाल..
बस र ट्रक ठोक्किँदा २८ घाइते, तीनको अवस्था गम्भीर
चितवन, २६ जेठ । मुग्लिन मलेखु सडकखण्डअन्तर्गत चितवनको दारेचोक चुम्लिङटारमा सोमबार बिहान बस र ट्रक ठोक्किएर भएको दुर्घटनामा २८ यात्रु घाइते भएका छन् । तीन यात्रुको अवस्था गम्भीर रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनले जनाएको छ । पोखराबाट काठमाडौं जाँदै गरेको ना४ख ६७८ नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आइरहेको ना४ख १००८ नम्बरको ट्रक एकआपसमा..
गोसाँइकुण्ड जान लागेका धादिङ मैदीका रामप्रसाद अर्यालको निधन
रसुवा २५ जेठ । गोसाँईकुण्ड जान लागेका एक यात्रुको यहांस्थित लौरीविनायकमा मृत्यु भएको छ । गंगादशहरा मेलामा हिजो गोसाँईकुण्ड हिंडेका धादिङ जिल्ला मैदी २ का ७५ वर्षीय रामप्रसाद अर्यालको लेक लागेर मृत्यु भएको हो । अर्यालको हिजो दिउसो साँढे तीन बजे उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाले जनाएको छ..
सामाजिक संघसंस्थामा भएको राजनीतिप्रति धादिङवासी चिन्तत
हरि पन्त पोखरा २४ जेठ । सामाजिक संघ–संस्थामा राजनीतिक विचारले प्रवेश पाउँदा समस्या निम्तिने गरेको भन्दै पोखरामा रहेका धादिङवासीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । धादिङ–पोखरा सम्पर्क समिति आगिन्चोक इकाइले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको धादिङ–पोखरा सम्पर्क समितिका लागि धादिङवासीको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने..
धादिङ पोखरा आगिञ्चोक इकाइद्वारा अन्तरक्रिया
पेखरा, २४ जेठ । धादिङ पोखरा सम्पर्क समिति आगिञ्चोक इकाईद्वारा शनिबार पोखरामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । धादिङ पोखरा सम्पर्क समितिको विगत, वर्तमान र भविष्य र धादिङ र पोखरामा धादिङवासी विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत सहित समाजको भविष्य र आगामी दिनको योजना समेत प्रस्तुत गर्दै अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको..
अनलाइन मिडियासम्बन्धी प्रतिवेदन सञ्चारमन्त्रीलाई हस्तान्तरण
काठमाडौं १९ जेठ, - अनलाइन सञ्चार माध्यमसम्बन्धी सुझाव समितिले सोमबार सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा समितिका संयोजक तथा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले मन्त्री रिजाललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्कीको..
काठमाडौ: नेपालमा आरोहण गर्न सिकने हिमालको संख्या चार सय १४ पुगेको छ। सरकारले पछिल्लो पटक यही जेठ ७ गते एक सय चारवटा नयाँ हिमाल खुल्ला गरेपछि आरोहण गर्न सकिने हिमालको संख्यामा वृद्धि भएको हो। सरकारले गत बुधबार ६ हजार आठ सय मिटर भन्दा कम उचाईका दुई वटा र त्यसभन्दा माथिका एक सय दुईवटा हिमाल आरोहणका लागि खुला गरेको छ। सरकारले खुला..
नयाँ ७२ वटा नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत
काठमाडौं, जेठ ३ - सरकारले नयाँ घोषणा भएका ७२ वटा नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत खटाएको छ । तत्कालको लागि नगरपालिकाको कामकाज गर्न कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कर्मचारी खटाइएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै मन्त्रालयले घोषणा भएका नगरपालिकाहरुले गाविस कार्यालयबाट हुँदै आएको काम अब नगरपालिकाको नामबाट गर्न..
नौबिसे नागढुङ्गा सडक मर्मत रोकियो
नागढुङ्गा- निर्माण सामग्री आयातमा समस्या भएको भन्दै नौबिसे नागढुङ्गा सडक मर्मतको काम स्थगित भएको छ । विगत लामो समयदेखि सो सडकखण्डको मर्मत सुरु भएको भए पनि ठेकेदारको लापरबाहीका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक निर्माण सामग्रीको अभावमा मर्मतको काम रोकिएको हो । सो सडकखण्डको धेरैजसो स्थानमा ढलान गर्नुपर्ने भए..
एपेक्समा बुद्ध जयन्ती
काठमाण्डौँ - काठमाण्डौँको मध्यबानेश्वरस्थित एपेक्स लाइफ स्कुलका विद्यार्थीले विबिध कार्यक्रमका साथ २५५८आंै बुद्ध जयन्ती मनाएका छन् । विद्यार्थीहरुको संस्था एपेक्स बाल क्लबले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । समारोहमा विद्यार्थीले भगवान बुद्धको जीवन र शिक्षाका बारेमा चर्चा गर्नुका साथै बुद्धको पूजाअर्चना पनि गरेका थिए । कार्यक्रममा..
सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई सुब्बाको काम
२६ बैशाख, काठमाडौं । सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफूहरु उपसचिव भए पनि सुब्बासरहको जिम्मेवारी दिएमोमा गुनासो गरेका छन् । विशेष बढुवाबाट उपसचिव भएका कर्मचारीलाई शिक्षा मन्त्रालयले सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीका रुपमा खटाए पनि पदअनुसार काम नपाएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनको तयारीसमेत गरेका छन् । निजामती सेवा ऐनको २४ (घ) अनुसार..
बृद्धबृद्धाको स्याहार सुसारका लागी पोखरामा आनन्दित गृहको स्थापना
पोखरा –पछिल्लो समय नेपाली समाज पश्चिमेली संस्कार तिर उन्मुख भइरहदा समाजमा वालवालिका र बृद्धबृद्धाहरुले उचित स्याहार सुसार पाउन छाडेका छन । बालवालिकाहरुका लागी शिशु स्याहार केन्द्रहरुको स्थापना भएको भएता पनि बृद्धबृद्धाहरुका लागी अझै पनि त्यस्ता स्याहार केन्द्रहरु सञ्चालनमा आइसकेको छैन । त्यसैलाई मध्येनजर गरेर पोखरा १२..
३२ जिल्लामा प्रजिअ हेरफेर-कस्को सरुवा कहां भयो ?
काठमाडौं : सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यापक हेरफेर गरेको छ। गृह मन्त्रालयले शुक्रबारको निर्णयअनुसार ३२ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई काजमा खटाएको हो। गृहले अन्य १४ जना उपसचिवलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय र विभिन्न जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाएको छ। गृह मन्त्रालयले काज सरुवा पाएका..